Kitra – «Ligue des champions d’Europe» : hiaro ny tombon’isa azony ny PSG any Angletera | NewsMada
Anisan’ny famaranana kely mialoha ny fotoana ny lalaon’ny PSG sy ny Chelsea, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, amin’ity anio ity. Manantombo ny Frantsay, saingy vonona hanala vela ny Anglisy.
Hitodika any amin’ny kianja Stamford Bridge avokoa ny mason’ny mpitia baolina kitra anio alina. Hifantoka amin’ny lalao ampahavalon-dalana miverina, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, hikatrohan’ny Paris St Germain sy ny Chelsea. Efa manana tombony, 2 noho 1 ny Parizianina, eto. Tanjon’i Laurent Blanc ny hiaro izany tombonisa izany. Na izany aza, manome baiko tsy hiaro tena be hatramin’ny farany fa hampidi-baolina ihany koa ny tenany. Ady sahala fotsiny mantsy dia ampy hiakaran’ny PSG any amin’ny ampahefa-dalana, anio.
Anisan’ireo nantsoin’i Laurent Blanc, ary tafiditra ao anatin’ireo mpilalao 21 ho any Angletera, i Marco Verratti sy Blaise Matuidi. Izy mirahalahy ireo izay naratra efa ho andro maromaro izay. Tsy fantatra kosa na ao anatin’ireo 11 hijoro voalohany ry zalahy na tsia. Tsy anisan’ireo nentina kosa ilay Ivoarianina, Serge Aurier, noho ny ompa sy faniratsirana nataony ny mpanazatra sy ireo mpilalaon’ny PSG.